कठै धोती राजनीति !
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिकठै धोती राजनीति !
हाहाहा… कन्टिर–बाबूलाई आज बिहानैदेखि बडो हाँसो उठिरहेको छ । तर हाँस्न पनि कति हाँस्नु ? हाँसो रोकिने छाँटकाँटै छैन ।
आज काठमाडौँमा ‘धोती’ जुलुस रे ! कन्टिर–बाबूको जिज्ञासा नि– कस्तो जुलुस ? सेतो धोती कि रङ्गीन धोती ? धोती लगाएर कि धोती देखाएर ? धोती समातेर कि धोती उचालेर ? धोती मनैले लगाएको कि दुनियाँलाई देखाउन लगाएको ?
हाहाहा … कन्टिर–बाबूको हाँसो अझै रोकिएको छैन ।
रमाइलो कुरा त के भने धोती लाएर अरिङ्गालहरू पो सडकमा आउने रे ! यसमा कन्टिर–बाबूको टिप्पणी छ– अरिङ्गालहरूले आफूलाई अप्ठेरो परेपछि बल्ल सम्झिए धोती । तर हिजो मधेस आन्दोलनका बेला मानव साङ्लोलाई ‘माखे–साङ्लो भन्या बिर्सिए । नाकाबन्दीको समयमा भएको आन्दोलनलाई विदेशीको इसारामा बोर्डर–पारिको आन्दोलन भन्या कति चाँडै पुरानो कुरा भो । सबैले रोक्दा–रोक्दै शक्ति–प्रदर्शनका लागि राजविराज आउन खोज्दा मानिस मारिएको कुराको त सम्झना गर्नु पनि बेकार भो ?
यस्तो पृष्ठभूमिमा आज धोती जुलुस रे ! यस्तोमा कन्टिर–बाबू नहाँसेर के गर्नु ?
तर कन्टिर–बाबू अलि–अलि आवेशमा पनि आएका छन् । स्वरमा अलिकति आक्रोश मिसाएर भन्छन्– होस गर है अरिङ्गाल हो, माथि चर्चा गरिएका सबै ठाउँमा तिनै ‘धोती’को उपस्थिति थियो, आज स्वार्थवश तिमीहरू जसलाई गुहार्दै छौ । अब आएर तिमी आफ्नो लाभका लागि ‘धोती’लाई प्रयोग गर्ने तयारी गर्दै छौ, अझ त्यो राजनीतिका लागि, जसले धोती वस्त्रधारीलाई कहिले पनि महत्त्व र सम्मान दिन जानेन ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– त्यसो त आह्वान सबैले सबै कुराको गर्न पाए । तर प्रयोग हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ आज ‘माइतीघर’ जाने तयारी गर्नेले जानुन् ।
अरिङ्गाल धोती जुलुस प्रयोग